शिक्षामा खट्केको कुरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
पुस्तकमा मात्र अल्झनु वा रमाउनु अनि बाजा बजाउनु र नाच्नु भनेको पढाइबाट टाढा भाग्नु पक्कै होइन । किताबको किरो मात्र भएर चम्कन सकिन्छ भन्ने कुरामा अल्झिरहनु हुँदैन ।
पुस १०, २०७५ सुरेशराज शर्मा
काठमाडौँ — नेपालले नोबेल पुरस्कार पाउने अवस्थामा पुग्न त पर्खनै पर्ला, तर स्पोर्टस, एथलेटिक्स र कला क्षेत्रमा भने चाँडै छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । प्रत्येक स्कुल–कलेजमा खेलकुद मैदान हुनुपर्छ ।
स्कुलको पूर्वाधार विकास गर्दा ज्यादै खट्किने कुरा नै सानो बगैंचा (उद्यान) नहुनु, खेलकुद मैदान नहुनु, कम्पाउन्ड वाल, ढोका र चमेनागृह नहुनु हो । केही निजी विद्यालय र तराईतिरका केही स्कुलमा मात्र यी संरचना देख्न पाइन्छ ।
ससाना बालबालिकाले खेल्ने ठाउँ नपाउनु, प्रकृतिबारे सिक्न बगैंचा नपाउनु, भोक लाग्ने बित्तिकै खाने ठाउँ नपाउनु विद्यालयलाई शोभा नदिने कुरा हुन् । भए पनि अपर्याप्त छन् र अलि ठूला उमेरकाले ओगट्छन्, सानाले पाउँदै पाउँदैनन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ, ‘उद्यानमा बस गई सब तत्त्व खुल्छन् ।’
कुनै कुरा सिक्नुपर्‍यो भने साना उमेरकाले चाँडो सिक्छन् भनिन्छ । खेल्नु भनेको मनोरञ्जन गर्नुमात्र होइन, अनुशासित हुन सिक्नु र प्रतिस्पर्धा गर्न सिक्नु पनि हो । फुटबल भनौं, क्रिकेट भनौं, उमेरमै सिक्नुपर्छ ।
३५/४० वर्षको भएपछि त प्रतिस्पर्धाका लागि होइन, सोखका लागिमात्र खेलिन्छ । नेपालमा, त्यो पनि पहाडी भेगमा बस्नेको शरीर चुस्त हुन्छ । खुराक मिल्यो भने र समयमा सिक्न पायो भने देशभित्रको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, बाह्य प्रतिस्पर्धामा पनि चम्कन सक्छ ।
साना उमेरकाले खेल्न नपाउने, सही उमेरकाले पनि बल्ल–बल्ल केहीमात्र खेल्न पाउने व्यवस्था पटक्कै मिलेन । पढ्नु भनेको पुस्तकमा मात्र अल्झनु वा रमाउनु अनि बाजा बजाउनु र नाच्नु भनेको पढाइबाट टाढा भाग्नु पक्कै होइन ।
समूहमा गरेको काम कति सार्थक हुन्छ, खेलकुदबाट त्यो थाहा हुन्छ । समूहमा प्रत्येकले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । गोलकिपरले गोल रोक्छ, गोल गर्न जाँदैन । क्रिकेटमा सानो गल्ती भयो भने आउट नै हुनपुग्छ वा विपक्षीले आउट गरिदिन्छ । प्रत्येक खेलाडीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ । एकले गरेको गल्ती र लापरबाहीले आफ्नो टिमले नै हार्न पुग्छ । साथी–साथीले मिलेर खेल्यो भने जितिन्छ ।
आफ्नो गल्तीको दोष अर्कोलाई दिन पाइँदैन । अर्को स्कुलको टिमलाई हराउन सकिएन भने आफ्नो साख रहँदैन । तसर्थ स्कुलमा खेलिने खेलले अनुशासनको महत्त्व सिकाउँछ । पूरा तयारी गरेर काम गर्‍यो भने त्यो काम पूरा हुन्छ भनी सिकिन्छ । आफ्नो कमजोरीले पूरै टिमको हार हुनगएको देख्नुपर्छ र त्यसको लाजको भार आफूले बोक्नुपर्छ ।
आफूभन्दा राम्रो गर्ने व्यापारीले गर्दा आफ्नो व्यापारलाई धक्का पुग्छ, त्यसले व्यापार गर्नेलाई पनि पाठ सिकाउँछ । स्कुलदेखि नै अनुशासन र खेलको मर्यादा खस्कँदा हार बेहोर्नुपर्छ । अझ कहिलेकाहीं ‘जसले पनि आफ्नो स्पिरिटलाई स्पोर्टसम्यानको स्पिरिटमा राख्नुपर्छ’ भनिन्छ । खेल आफू हार्ने तर अरूले झेल गर्‍यो भन्ने होइन । अर्को प्रतिस्पर्धामा आज भएको गल्ती नदोहोर्‍याई गर्छु भन्ने स्पिरिटलाई ‘स्पोर्टसम्यान स्पिरिट’ भनिन्छ ।
कुनै खेल एक जनासँग मात्र खेलिन्छ, कुनै दुईजना प्रतिस्पर्धीसित त कुनै ६ जना प्रतिस्पर्धीसित खेलिन्छ । कुनै–कुनैले हिमाल आरोहणमा अरू आरोहीसित र प्याराग्लाइडिङसम्म पनि प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्छन् ।
अब केही बेर शारीरिक व्यायामबारे चर्चा गरौं । यही विधामा कहिले रूसी, कहिले जर्मन, कहिले फ्रेन्च, कहिले जापानी र कहिले चिनियाँसित प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । यी सबै विधाका खेलमा जसको अभ्यास पुग्यो, जसले सानै उमेरदेखि खेल्न पायो, जसले सही प्रशिक्षण पायो, त्यसैले राम्रो गर्न सक्छ ।
समयमै सिकाइयो भने राम्ररी सिक्यो भने प्रतिस्पर्धीले भन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने स्पिरिट राख्यो भने नेपालले ओलम्पिकमा चाँडै मेडल जित्छ । तीन–चार वर्षको मात्र प्रयासले संसारकै उत्तम खेलाडी भनी सिद्ध गर्न सकिन्छ । त्यता हाम्रो ध्यान समयमा नै पुग्नुपर्छ । किताबको किरोमात्र भएर चम्कन सकिन्छ भन्ने कुरामा अल्झिरहनु हुँदैन । यहाँ यही भन्न खोजिएको हो ।
अब केही कुरा कलाबारे भनौं । कलामा भएको पौरख त झनै गौरवको कुरा हो । कलामा दुई धार हुन्छन्– एब्स्ट्रयाक्ट आर्ट र परफर्मिङ आर्ट । राम्रो नाच्न सक्नु, राम्रो आवाजमा गीत गाउन सक्नु, मञ्चमा नाटक वा चलचित्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नु, राम्रो भाषण गर्न सक्नु, राम्रोसित पढाउन सक्नुलाई परफर्मिङ आर्ट भन्न सकिन्छ । त्यसैले राम्रा केटाकेटीहरू चाँडै चम्किने हिरो–हिरोइन हुन मरिमेट्छन्, राम्रा सङ्गीतज्ञ र राम्रा गायक हुन खोज्छन् ।
नेपाल मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला र पत्थरकलामा परापूर्वकालदेखि नै अब्बल दर्जाको थियो । चैत्यको निर्माणमा पनि उत्तिकै ख्याति आर्जन गर्नसकेका थिए । कलाको केन्द्रमा भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका क्षेत्र विशेष रूपमा परिचित क्षेत्र हुन् ।
थाङ्काको पेन्टिङ र अन्य पेन्टिङमा पनि नेपाल अब्बल नै रहिआएको छ । नेपालका गौरवका वस्तु सङ्ग्रह गरिएका संग्रहालयहरू ठाउँ–ठाउँमा, अझ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठित कलेजहरूमा वा स्कुलहरूमा हुनुपर्ने हुन् । ती स्थलहरू भएका भए हाम्रा नयाँ पिढीका बालबालिकामा ती कलाप्रति रुचि जाग्ने थियो ।
अध्ययन स्थल भनेको कक्षाकोठा, त्यहीँका प्रयोगशाला र पुस्तकालय मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन । अध्ययन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू धेरै छैनन् । हाम्रा विद्यार्थीले परीक्षामा उत्कृष्टता हासिल गरेको कुरामा मात्र गर्व गर्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नै सङ्ग्रहमात्र होइन, अरूले गरेका प्रयासप्रति आकर्षण र जानकारी राख्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा कुमारी पूजाजस्तो जीवित वस्तुको आकर्षण अन्य मुलुकमा छैन । हाम्रो परम्परादेखिका पूजाआजामा पनि पहिले–पहिलेदेखिका गौरवपूर्ण वस्तु हुन्छन् । यी कुराको महत्त्व छ । सभ्यता भनेको क्रमिक विकास र निरन्तर परिष्कृत हुँदै बनेको रूप र गौरव हो । सबैले गौरव गर्ने भनेको आर्जन गर्दै गरेको ख्याति हो भनी बुझ्नुपर्छ ।
लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति हुन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:४७
विप्रेषणको बलमा विलासी आयात
विप्रेषण र आयातमा आधारित राजस्वले अर्थतन्त्रलाई स्वाभिमानी रूपमा चित्रित गर्दैनन् । दुवैको दीर्घकालीन विकल्प खोज्नु जरुरी छ ।
पुस १०, २०७५ रमेश पौडेल
काठमाडौँ — अहिले व्यापार घाटाको चर्चा छ । यस सन्दर्भमा अध्ययन, लेख र विश्लेषण धेरै आए । यसका निष्कर्षहरू नीतिका रूपमा आएर कार्यान्वयनै भएनन् । केही नीति बने, तर ती हावादारी छन् ।
देशभित्र यो वा त्यो बहानामा निर्यातजन्य उद्योग नचल्ने तर हाम्रो बढ्दो र बदलिँदो उपभोग प्रवृत्तिका कारण व्यापार घाटा दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । तथ्याङ्कले भन्छ– नेपालको कुल निर्यातको झन्डै १७ गुणा बढी आयात भइरहेको छ । आयात बढेसँगै निर्यात बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रको कमजोरी हो ।
आयात बढ्दा राजस्व असुलीमा लक्ष्यहरू भेटिएका छन् । विगतमा जति मिहेनत गर्दा पनि सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठ्दैनथ्यो । आज मूलत: आयात बढेकैले त्यो सहज भएको हो । केही शासकीय शैलीका कारण पनि हो । अर्कोतर्फ नागरिकको क्रयशक्ति केही बढेको छ ।
अहिले खासगरी वैदेशिक रोजगारका कारण र बाहिरी जगतसँग हाम्रो सम्बन्ध परिपक्व बन्दै गएकाले नागरिकको एउटा वर्गको क्रयशक्ति बढेको छ । त्यसैले ठूलो व्यापार घाटाका बाबजुद पनि हामी एक हिसाबले चल्नसकेका छौँ । अर्थात् विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, त्यही मुद्राको बलमा विदेशबाट आयात गरेर नागरिकको जनजीविका सजिलो बनाउने । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल रीति बनेको छ ।
हामी चाहे विप्रेषणमा भर गरौँ या आयातमा आधारित राजस्व, यी दुवैले देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो र स्वाभिमानी रूपमा चित्रित गर्दैनन् । दुवैको दीर्घकालीन विकल्प खोज्नु महत्त्वपूर्ण हो । यी दुवैबाट भएका सहजता र उपलव्धिलाई अधिकतम राष्ट्रिय उपलव्धि प्राप्त गर्नेगरी परिचालन गर्नु अहिलेका कार्यभार हुन् ।
आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण राष्ट्रिय उद्योगमा असर परेको छ, स्वदेशमा रोजगारी कठिन बन्दै गएको छ र प्रकारान्तरले परनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुँदैछ, भएको छ । त्यसैले राजस्व राम्रो हुँदाहुँदै पनि आयातलाई नराम्रो मान्ने गरिन्छ ।
सरकारी राजस्वमा आयातको योगदान झन्डै ३५ प्रतिशत छ, यो प्रत्यक्ष हो । अप्रत्यक्ष योग्दान अझ बढी छ । यो सानो हिस्सा होइन ।
आयातबाट हुने राजस्वको झन्डै ३० प्रतिशत गाडी र हल्का सवारी साधनबाट आइरहेको छ । हाम्रो आयात बढी विलासिताका वस्तुतर्फ देखिँदैछ । हाम्रो आयातमा आधारित राजस्व कुल गैरकर राजस्वको ३ गुणाभन्दा बढी छ ।
आयातले व्यापार घाटामात्र बढाएको छैन, राजस्वमा ठूलो योग्दान गरेको छ । राजस्वमा आयातको यो योगदानका अतिरिक्त यसले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु छनोटको
अवसर बढाएको छ । मूल्य पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गरेको छ । आयात
बढ्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारितबाट तीव्र गतिमा विप्रेषण र आयात निर्देशित सेवामा आधारित बन्दैछ ।
गत महिना चीनका राष्ट्रपतिले आयात सम्मेलन उद्घाटन गरेर विश्वसामु सन्देश दिए– ‘चीनले निर्यातमात्र गरेको छैन, आयात पनि गरेको छ ।’ विश्वका करिब सबै राष्ट्रका राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र व्यवसायी निर्यातका सन्दर्भमा चिन्तित भैरहेका बेला गरिएको त्यो सम्मेलनले यस क्षेत्रका जानकार सबैको स्वाभाविक ध्यानाकर्षण गरेको थियो, छ ।
कतिपय अनुसन्धानले पनि सल्लाह दिएका छन् कि आयात आफैमा नराम्रो होइन । के र किन आयात गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफसहित आयात गर्नु राम्रो हो । उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग गरिने वस्तुको आयातले प्रकारान्तरले निर्यात बढाउनै सहयोग गर्छ । प्रविधि, मेसिनरी, उपकरण यसका केही उदाहरण हुन् । अत: आयातको योगदान निर्यात बढाउन पनि हुनुपर्छ तर हामी त्यो दिशातर्फ गैरहेका छैनौँ ।
अहिले आइरहेको विप्रेषण आयातका लागि खर्चिनु नपर्दो हो त त्यसले राष्ट्रिय आय बढाउन राम्रै योग्दान गर्न सक्थ्यो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हाम्रा अरु पनि माध्यम छन्, तर खासै प्रभावकारी तरिकाले कामयावी सावित गराउनसकेका छैनौँ ।
नीति निर्माताले बुझ्नैपर्छ, विप्रेषण हाम्रो सजिलो कमाइ होइन, यो भावी अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने एउटा अप्ठ्यारो संकेत हो । त्यसैले यसबाट आर्जित आयलाई अलि संयमतापूर्वक परिचालन वा खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छ । जस्तो– विदेशको आम्दानीको निश्चित समयपछि निश्चित हिस्सा औद्योगिक उत्पादनमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । जति आउँछ, सबै खाएर पचाउँछ भन्ने तरिकाले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा घाटा हुन्छ ।
समस्या कहाँ ?
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समस्या आयात बढी हुनुमात्र होइन । यो एउटा पक्षमात्र हो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको खास समस्या अनुत्पादक, विलासिताका र मध्यम एवं उच्च स्तरका उपभोग्य वस्तु आयात हुनु हो ।
हाम्रो आयातको निर्यातमा कतै साइनो नभेटिनु समस्या हो । राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्ष योग्दान गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने खालका मेसिनरी जम्मा ४ प्रतिशत हाराहारीमात्र आयात छ । आयातको यो प्रवृत्ति राष्ट्रलाई बोझिलो भएको छ ।
हामी कहिलेसम्म विप्रेषणबाट आर्जित विदेशी मुद्राका भरमा आयात गरिरहने हो र जनजीविकालाई सहज बनाउने हो ? यसबाट उम्कन हामीले समय–सीमा तोकेरै योजना बनाउन आवश्यक छ । आयात बढोस्, तर त्यसकै हाराहारीमा हामी कहिलेसम्ममा निर्यातलाई पुर्‍याउन सक्छौँ ? हाम्रा अगाडि ठूलो चुनौती यही हो ।
अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन र उपभोगमा यति धेरै बेमेल हुनुको कारण खोतल्नैपर्छ । थोरै मिहेनत गर्दा हामीले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुहरू पनि हाम्रा केही नीतिगत कमजोरीका कारण आयात भैरहेका छन् । उदाहरणका लागि हामी ठूलो हिस्सामा लत्ताकपडा आयात गरिरहेका छौं ।
यसलाई एउटा हदसम्म आत्मनिर्भर बनाएर लैजान सक्नुपर्छ । माछा र मासुमा समेत हामी आत्मनिर्भर बन्नसक्दा बाहिरिने विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा जोगाउन सकिन्छ । सामान्य खाद्यपदार्थ कुकिज र बिस्कुटजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने हो । कृषिप्रधान देशमा खुर्सानीसमेत भारतबाट आयात गर्न केले हामीलाई बाध्य पारेको छ ? यस्ता वस्तुको सूची लामो हुनसक्छ, जसमा देशले थोरै मिहेनत गर्दा स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ, त्यता ध्यान जानुपर्‍यो ।
यस्ता कुरा गर्दा उद्यमशीलता विकासको कुरा जोडिएर आउँछ । उद्यमशीलताको कुरा गर्दा लगानीको विषय चर्को उठ्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । उत्पादनमूलक धन्दाका लागि लगानीको समस्या र ब्याज चर्को हुने जटिल समस्या छन् । हाम्रा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीका रणनीतिहरू केवल सेवामूलक व्यवसायका लागि उपयुक्त हुने खालका भए ।
बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूको नाफा ३०० प्रतिशतले सम्म बढ्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सधैंं कठिन हुने समस्याको समाधान नखोजेसम्म देशमा उत्पादनमूलक व्यवसाय नफस्टाउने प्रस्ट छ । यतातर्फ ध्यान नजानु दु:खद पक्ष हो ।
अत: विप्रेषणको भरमा वस्तु आयातलाई बढाउने होइन, आयातलाई निर्यात बढाउने माध्यम बनाउन सक्दामात्र अर्थतन्त्र दीर्घकालका लागि सजिलो बाटोमा जानेछ । तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र देशको भौगोलिक अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र रणनीति तय गर्न सक्दामात्र यो सजिलो बन्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार राष्ट्रिय विषय बन्नु आवश्यक छ, बनोस् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:४४